News Feed Archives | Page 36 of 41 | Frontier Myanmar
ဦးထင်ကျော် နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဖြစ်ပြီ
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်မစတင်မီ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် စကားပြောနေသည့် ဦးထင်ကျော်။ ဓာတ်ပုံ- အေအက်ဖ်ပီ ယခုအောင်ပွဲသည် ပြည်သူများနှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ အောင်ပွဲဖြစ်သည်ဟု ဦးထင်ကျော်က ပြောကြားခဲ့သည် နေပြည်တော်၊ မတ် ၁၅ မြန်မာနိုင်ငံ၏ သမ္မတသစ်အဖြစ် ဦးထင်ကျော်အား ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်တွင် ယနေ့ မဲပေးရွေးချယ် တင်မြှောက်လိုက်သည်။ ထို့ကြောင့် ၎င်းသည် ရာစုနှစ် ထက်ဝက်ကျော်အတွင်း ပြည်သူလူထု၏ ထောက်ခံမှုဖြင့်.
ဦးထင်ကျော်နှင့် ဦးဟန်နရီဗန်ထီးယူတို့ ဒုသမ္မတများ ဖြစ်သွားပြီ
ဦးထင်ကျော်နှင့် ဦးဟန်နရီဗန်ထီးယူ။ ဓာတ်ပုံ- တေဇလှိုင်နှင့် အန်းဝမ် နေပြည်တော်၊ မတ် ၁၁ လွှတ်တော်နှစ်ရပ်တွင် အမည်စာရင်းတင်သွင်းထားသည့် ဒုသမ္မတလောင်းများ တစ်ဦးစီထက် ပိုနေသဖြင့် ယနေ့ ဆန္ဒမဲပေးကာ ပြည်သူ့လွှတ်တော်တွင် ဦးထင်ကျော်နှင့် အမျိုးသားလွှတ်တော်တွင် ဦးဟန်နရီဗန်ထီးယူတို့အား ဒုတိယသမ္မတများအဖြစ် ရွေးချယ်ခဲ့ကြသည်။ ရွေးကောက်ခံ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များ အစုအဖွဲ့နှင့် အမျိုးသားလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များ.
ဦးထင်ကျော် သမ္မတ ဖြစ်လာရန် သေချာနေ
၂၀၁၀ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာ ၁၃ ရက်နေ့က နေအိမ်အကျယ်ချုပ်မှ လွတ်မြောက်လာသည့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား ဦးထင်ကျော်နှင့်အတူ ၎င်း၏ ခြံတံခါးဝတွင် တွေ့ရစဉ်။ ဓာတ်ပုံ- အေအက်ဖ်ပီ နေပြည်တော်၊ မတ် ၁၀ သမ္မတနှင့် ဒုသမ္မတများ တင်မြှောက်ရန်အတွက် ဒုသမ္မတလောင်းများကို လွှတ်တော်များတွင် ယနေ့ရွေးချယ်ကြရာ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်က တင်သွင်းခဲ့သည့်.
တပ်မတော်က ရွေးချယ်မယ့် ဒုတိယသမ္မတ ဘယ်သူ ဖြစ်လာမလဲ
ဒုတိယအကြိမ် လွှတ်တော်အစည်းအဝေးများသို့ တက်ရောက်လာကြသည့် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် အချို့၊ ဓာတ်ပုံ- တေဇလှိုင် မြန်မာနိုင်ငံ၏ နိုင်ငံရေးကံကြမ္မာသည် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် တပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်တို့အပေါ်တွင် မူတည်နေပြီး ဒုတိယ သမ္မတအမည်စာရင်းများ တင်သွင်းရေးအတွက် အကျေအလည် ညှိနှိုင်းနေကြရသည့် အနေအထားဖြစ်သည် စိုးသန်းလင်း ရေးသားသည်။ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်က ဦးဆောင်ဖွဲ့စည်းမည့် အစိုးရသစ်ကို.